जब आफ्नो आदर्श आयाम जीन्स प्यान्ट कसरी परिभाषित गर्न छनौट
कि फैशन तेजी परिवर्तन छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद केही कुराहरू वस्तुतः अपरिवर्तित धेरै वर्ष को लागि हाम्रो साथ रहने। त्यो जिन्स वस्त्र को सबै भन्दा लोकप्रिय लेख को एक धेरै वर्षसम्म मा जा गर्नुपर्छ गरिएको: यो एक सय प्रतिशत हुनुपर्छ छ, र फेला छैन, सायद, तिनीहरूले थिए मानिस। केवल सजावट विकल्प परिवर्तन र आधारभूत सिद्धान्त नै रहन्छ: यो pockets संग प्यान्ट विशेष बाक्लो कपास कपडा छ - तिनीहरूले सामान्यतया5हो, तर त्यहाँ विकल्प हुन सक्छ। जिन्स धेरै भिन्न छन्: सुरुचिपूर्ण सप्ताह गर्न व्यावहारिक दैनिक विभिन्न मोडेल देखि तथापि, तिनीहरू सबै हेरविचार, व्यावहारिकता र सुविधा को सादगी द्वारा एकताबद्ध छन्। तिनीहरूले लकर कोठा र लगभग कुनै पनि जुत्ता मा धेरै कुराहरू संग संयुक्त छन्।
तपाईं चयन गर्दा आफ्नो जिन्स आकार पर्याप्त स्पष्ट हुन सक्छ। यहाँ जिन्स आकार तालिका, प्रणाली को सामान्य आकार हामीलाई एकतामा बाँध्ने जो मदत गर्न सक्नुहुन्छ, र युरोपेली मानक अमेरिकी हामीलाई धेरै स्पष्ट छैन। हेर्न र तपाईं इन्टरनेटमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो हात मा छैन, र त्यसपछि empirically कार्य गर्न बाँकी गर्दा नियम रूपमा, यसबारे जरुरी हुन्छ।
नियम, अंकन को लागि सबै भन्दा निर्माताहरु एक युरोपेली तालिका जीन्स आकार प्रयोग गर्नुहोस्। दुई मान को लेबल मा: - कमर र एल - डब्ल्यू लम्बाइ, को "कमर" र "लम्बाइ" अर्थात्। डब्ल्यू को आकार को अतिरिक्त 16 थपेर हामीलाई परिचित रूपान्तरित हुन सक्छ, जस्तै, 28 + 16 = 44 एक अमेरिकी आकार प्रणाली, जहाँ तिनीहरूले022 देखि एक नम्बर एक कमर सङ्केत गर्छ wherein अक्षर र नम्बर को संयोजन, द्वारा डिजाइन गर्दै छन्, र पत्र एस पनि छ, एम वा एल - लम्बाइ, उदाहरणको लागि,6मिटर 27-28 / 32 वा हाम्रो युरोपेली वृद्धि मध्यम को 44 पारस्परिक रहेको छ। अमेरिकी तालिका प्रत्येक चरण लगभग दुई युरोपेली आकार धारण। को जीन्स राम्रो छ, जब एक खरीद बनाउन अनलाइन उदाहरणका लागि, यी आयाम यो कहिलेकाहीं उपयोगी छ थाहा मात्र देशमा ध्यान किन्न, तथ्यलाई बावजुद।
जिन्स उचित चयन - सजिलो छैन, र धेरै मानिसहरू यो कसरी गर्न थाहा छैन। अर्डर सही जिन्स किन्न मा जान्नु आवश्यक छैन आकार। पहिले हाम्रो आमाहरु यो सिद्धान्त द्वारा निर्देशित थिए: नयाँ ट्राउजर मात्र supine स्थिति, कठिनाई संग fastened, र सबै को सबै भन्दा राम्रो यदि - सही आकार। यसलाई चयन गर्नुपर्छ त उच्च गुणस्तरीय जिन्स: वास्तवमा यो हुनत केहि अतिरंजित दृष्टिकोण, सही छ। धेरै प्रयास संग albeit, तिनीहरूले गरेपछि सबै, तर हुक हुँदा खडा छन् - भन्ने छैन एकदम साँचो हो। सुविधा को भविष्यको लागि चिन्ता नगर्नुहोस्: घण्टा एक जोडी को लागि सही जीन्स कपास मोजे, आधा एक दिन को अधिकतम, सारा रकम सुत्छन् निश्चित, तपाईं शिथिल बस्न जो प्यान्ट, छनौट भने हुन, र, तर भविष्यमा तिनीहरूले रचनाहरू हुनेछ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, चयन गर्न भने यस्तो तरिकाले जिन्स आकार धेरै महत्त्व प्ले छैन।
- चौडा मोडेल धेरै छरितो छन् यो सबै तपाईं हासिल गर्न चाहने प्रभाव निर्भर: कहिलेकाहीं आवश्यक प्यान्ट आकार पनि ठूलो को एक जोडी लिन - उदाहरणका लागि, वर्ष को एक जोडी पहिले यो धेरै फैशन थियो, तर यो नितम्ब अवतरण थियो भनेर चुनिएको गर्न राम्रो छ आदर्श, यो धेरै सुविधाजनक छ देखि।
विशेष ध्यान लम्बाइ, एल, इन्च हुनुपर्छ: यो छोटो प्यान्ट को खुट्टा छोटा, आकृति अंगभंग कि ज्ञात छ, र लामो - यो धेरै अव्यावहारिक छ, र तिनीहरूले कटौती गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो कुरूप हुनेछ। क्षणमा, सबै भन्दा साधारण मानिसहरू लागि महिलाहरु को लागि 32 र 34 को एक लम्बाइ, 165-178 र 178-185 सेमी को वृद्धि संग जीन्स को आकार हो, तथापि, बिक्री विशेष गरी ठूलो वा श्रृंखला पसलहरुमा अन्य विकल्प लम्बाईहरू, हुनुपर्छ। तपाईं जूता वा ब्यालेट फ्लैट्स लागि आकस्मिक मोडेल चाहनुहुन्छ भने तपाईं खाली खुटा खडा भने, तलामा एक आदर्श लम्बाई छलफल - एक सानो, बस एक सेन्टिमिटरले छोटो हुन सक्छ। को एडी वा मंच लम्बाइ अन्तर्गत जीन्स अप एडी को आधा हुनुपर्छ - यो खुट्टा lengthens ठूलो छ।
अब सबै भन्दा रोचक - मोडेलहरू बारेमा। यो पातलो मान्छे unremarkable आंकडा सबै विकल्प फिट कि र विकल्प व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू सीमित गर्न सकिन्छ, त्यसैले गरेको यो सुविधाहरू कुरा गरौं स्पष्ट छ। सबै भन्दा साधारण समस्या - पूर्णतामा। पूर्ण लागि तथापि, तिनीहरूलाई दिन छैन लगभग असम्भव छ, त्यसैले तिनीहरू परिचित हामी बन्न - यो जिन्स कि विश्वास छ। त्यसैले, हामी सिद्ध मोडेल लागि हेर्नु पर्छ। यो हो नेत्रहीन स्लिम - निश्चित यो एक गाढा-रंग, छाडा-उपयुक्त र साना pockets संग हुनेछ। रंग लाइटर, abrasions र हालै एक जोडी को लागि स्वागत सुस्त लगभग अनुवाद अगाडि पक्ष सिउनी संग मोडेल उत्पादन गर्न थाले: यो नेत्रहीन सफा गर्न एक शानदार समाधान र कहिलेकाहीं पनि आकार को एक जोडी छ। रुचि एक मोटी कपडा, र कुनै कम अवतरण गर्न दिइएको छ - त्यसको विपरीत, उच्च राम्रो। सजावट - कम्तिमा।
को खुट्टा ठीक बराबर छैनन् भने मदत सीधा जिन्स कमी लुकाउन वा अलिकति पनि हिप देखि flared, मुख्य कुरा हो - कुनै परिस्थितिमा तिनीहरूले नेत्रहीन को घटता बनाउन सक्छ खुट्टा चिकना किनभने कलिलो प्यान्ट खरीद छैन। गलत ठाउँमा droop छैन, तिनीहरूले परमेश्वरको निषेध, तल गिर छैन: र शीर्ष सिद्ध थियो मा अवतरण राख्न प्रयास गर्नुहोस्।
उच्च बस्ने संग नेत्रहीन लामो पार्नू खुट्टा मद्दत ट्राउजर, को एडी वा मंच, पाठ्यक्रम, उपयुक्त लम्बाइ अन्तर्गत पहना। पनि विशेष बाक्लो Tissues netyanuschimsya प्राथमिकता दिएर पेट र नितम्ब, लुकाउन सक्नुहुन्छ यी जिन्स मद्दत संग। तपाईं जीन्स निम्नानुसार आकार हो किन्न गर्दा प्रभाव धेरै लामो खुट्टा छ हासिल गर्न: आफ्नो आकार फिट आफ्नो लम्बाइ र चौडाइ भन्दा ठूलो हुन, कि छ, तिनीहरूले धेरै धैर्य गर्नुपर्छ। र लगाउने छैन एक एडी बिना, अन्यथा तपाईं राम्रो कुरा बिगार्न सक्छ - तिनीहरूले बाहिर बाटोमा छन् पनि भने।
Meh "Beaver": यो के हो? फर पानी र जमीनमा बस्ने जनावर संग भ्रमित हुँदैन!
"सम्मोहन": उज्ज्वल जाडो लागि उच्च गुणवत्ता लुगा
पन्जा आकार कसरी निर्धारण गर्ने?
जूता "अलास्का" बच्चाहरु: ग्राहक समीक्षा
डिजाइनर Ekaterina Smolina: एक जीवनी। फैशन घर Ekaterina Smolina
किन आँखा मा capillaries फुट्छ? समस्या को मूल के हो?
ओवन मा Flounder: खाना पकाउन व्यञ्जनहरु
Vasily Tropinin, को चित्रकला "द Lacemaker" - को को विवरण र इतिहास
Souvlaki: व्यञ्जनहरु। सानो Kebabs काठ skewers मा पकाएको र द्वारा पूछे जाने रोटी मा र्याप
KamAZ, इन्धन फिल्टर: विवरण, उपकरण प्रतिस्थापन र समीक्षा
परम्परागत चिकित्सा मदत संग जोडों र लागूऔषधको उपचार
उच्च दबाव मा पहिलो सहायता: को रणनीति
स्पेन। कोस्टा Dorada। सुनको Donaire बीच
ढल प्लास्टिक पाइप। सुविधाहरू, मूल्य निर्धारण, स्थापना